संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली दवारा जनताको नाममा भावुक सम्वोधन: सरकारले गरेका प्रगति विवरण र भावि कार्ययोजना प्रस्तुत : – HamroSamrachana
हाम्रो संरचना आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ 1447 Views
३ असोज काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका आप्नै प्रतिनिधिहरुद्वारा लेखिएको मूल कानून–संविधान जारी गरी भएको ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा सबैप्रति शुभकामना ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपालले डेढ वर्षको अवधिमा नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय सङ्घीयताको व्यवस्थापन सहजरूपमा गरेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजश्व बाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको बताउनुभएको छ ।
– त्यस्तो दिवस, जसको प्रतीक्षामा हामी नेपाली सात दशकदेखि सङ्घर्षरत थियौँ, त्यस्तो दिवस, जसले नेपाली जनसङ्ख्याको सयौँ थुङ्गा फुलहरुलाई एउटै मालामा उनी विविधतामा रहेको एकताको सन्देश प्रवाह गरेको थियो,
– दशकौँसम्म सङ्घर्षमा हेलिएकाहरु जसले पीडा झेलेका छन्बुझे/छन्, तिनका लागि आजको दिन गौरवगाथाले भरिएको दिवस हो । पारिवारिक बिछोड, उत्पीडन र छटपटीबाट उन्मुक्ति पाएका सबै नेपालीका लागि आजको दिन, स्वतन्त्रता दिवस पनि हो–प्राप्त उपलब्धिप्रति गर्व गर्ने उत्सव हो । त्यसैले यो हाम्रो राष्ट्रिय दिवस, न त फगत तामझाम हो, न आम जनतामा अरुचि हुने निरङ्कुश शासकहरुको ‘उर्दी र तामेली’ जस्तो हो ।
देशवासी दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु:
– त्यस्तो निष्ठा, जहाँ वंशानुगत÷जन्मजात श्रेष्ठता जस्तो अलोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कुनै स्थान हुन्न ।
– आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस दशककै ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सबै आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । र सवै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६ देखि ८ प्रतिशतको बीच छ । यसरी यो वृद्धि क्षेत्रगत र प्रादेशिक दुवै रूपमा सन्तुलित र समतामूलक छ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै मुलुक समतामूलक विकास र समृद्धिको को मार्गमा अघि बढेको सङ्केत मिलेको छ ।
– आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो वृद्धि एक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च वृद्धि हो ।
– यसै अवधिमा थप ३ हजार ७ सय हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका ४ लाख ९२ हजार निजी घर, ५ हजार विद्यालय र ६ सय ६५ वटा स्वास्थ्य चैकीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ ।
– वर्तमान सरकारको कार्यकालमा स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आउने नागरिकको सङ्ख्या तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । ७ लाख ८४ हजार परिवार सङ्ख्यामा रहेका वीमितहरुको सङ्ख्या २१ लाख ९५ हजार ३ सय ८८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को माघ मसान्तसम्म २५ जिल्लाका २ सय २९ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रम हाल ४८ जिल्लाका ४ सय ७१ स्थानीय तहमा विस्तारित भएको छ ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु:
– हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भनेका थियौं। कानूनहरु बने, जनशक्ति विन्यास भए । स्रोतको न्यायोचित वितरण भयो । तीनवटै तहमा सरकार सञ्चालनकालागि आवस्यक न्यूनतम भौतिक संरचना निर्माण भए । विकासकालागि आधार बनेको छ– कतै जग हालिएको छ, कतै पहिलो वा दोस्रो तल्ला थपिएको छ । विकासका लागि आवश्यक अरु तल्लाहरु थपिनेछन्, थप्दै/थप्दै अघि बढिने छ ।
– पाइला नै नचलाई कसरी दौडने ? यथास्थितिमा रहेर परिवर्तनको अनुभूति कसरी दिने ? रुपान्तरण हैन प्रतिक्रिया, परिणामसँग साइनो नै नहुने प्रक्रियामा किन र कति अल्झिरहने ? विना–मुद्दाका विषयमा मूल मुद्दाजस्तो बहस÷विवादको माहौल किन बनाउने ? अझै पनि ‘हुँदैन/सकियो’ जस्ता असन्तुष्टिको खेतीलाई उकेराकिन लगाउने ? अब हामीले तरिका फेर्नैपर्छ ।
– अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु. ३५ खर्बको छ । यो सरकारको सिङ्गो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु. ५० खर्ब पु-याइनेछ ।
देशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु: